Askar ka tirsan AMISOM oo lagu tooganayo Muqdisho kadib maanta xukun lagu riday - Caasimada Online
Home Warar Askar ka tirsan AMISOM oo lagu tooganayo Muqdisho kadib maanta xukun lagu...
Askar ka tirsan AMISOM oo lagu tooganayo Muqdisho kadib maanta xukun lagu riday
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay dacwad loo haystay shan Askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM, kuwaasi oo dad rayid ah ku dilay deegaanka Golwayn ee Shabeellaha Hoose.
Maxkamadeynta oo bilaabatay 5-tii bishaan ayna qaadeysay Maxkamadda AMISOM ee xerada Xalane ayaa waxay labo kamid ah askartii la soo eedeyay oo u dhashay dalka Uganda ku xukuntay dil toogasho ah.
Sidoo kale waxay maxkamadda ciidamada AMISOM ayaa saddex kamid ah eedeysanayaasha ku xukuntay min 39 sano oo xabsi ah.
Afhayeenka Beeralleyda gobolka Shabeellaha Hoose, Xuseen Cismaan Waasuge oo ku sugnaa maxkamadda oo la hadlay idaacada BBC-da ayaa sheegay in toddobo qof ay ku marqaati fureen eedeysanayaasha oo lix kamid ah ay yihiin ciidanka Uganda ee meesha joogay, sida uu sheegay.
“Waxaa Ugandha ka yimid (xubno ka tirsan) maxkamadda ciidamada. Jimcahii ayey billaabatay. Laba maalmood waxaa hadlay dadkii ku caddeynayay dembiga. Anaga waa nalagu casuumay, waana dhageysaneynay. Xalano ayey maxkamadeynta ka dheceysay, laakiin anaga wax Soomaali oo qareen ah oo noo doodayay ma jirin. Marqaatiga nalaga dalbadayna waa hal wiil oo ninka beerta iskalahaa uu dhalay,” ayuu yiri Xuseen Waasuge.
“Ninkii kabtanka ahaa ee ciidanka watay waxaa lagu xukumay dil toogasho. Ninkii ku xigay ee watay unugga wax laayay, waxaa lagu xukumay dil toogasho. Ninkii maydka miinada dul saaray ee ku qarxiyayna iyo labadii nin ee xabada ku furtayna waxaa lagu xukumay 39 sano.”
Qaar kamid ah ehellada dadkii rayidka ahaa ee la dilay oo ku sugnaa maxkamadda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka uu u dhacay xukunka, islamarkaana ay raali ka yihiin.
Dhacdada loo haystay askartaan ayaa waxay ahayd bishii August ee sannadkan, waxaa lagu dilay toddobo qof oo shacab ahaa, waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fadhiisiyay miino, ka dibna lagu qarxiyay.